उपत्यका हटस्पटको रुपमा परिणत हुँदै फेरी निषेधाज्ञा हुनसक्छ !! | Butwal Dainik
उपत्यका हटस्पटको रुपमा परिणत हुँदै फेरी निषेधाज्ञा हुनसक्छ !!
काठमाडौं :- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहातको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमले देशभरि २५ हजारभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित नाघे लकडाउन गर्नुपर्ने सुझाबसहितको निस्कर्ष निकाल्यो । मन्त्रालयले कोभिड–१९ क्राइसिस मैनेजमेन्ट सेन्टर ‘सीसीएमसी’लाई उक्त सिफारिश गरेको थियो । दुई सातापछि असोज २१ गते सक्रिय सङ्क्रमितको संख्या २५ हजार नाघेको छ ।